L08 ọchịchịrị osisi, China L08 ọchịchịrị woodgrain Ndị na-emepụta, Ndị na-eweta, actorylọ ọrụ - Sunpai Industries Limited
Usoro Smart & Multifunctional
Usoro USB & Car
L08 ọchịchịrị osisi
Packaging Details: 53.3x36x35cm / 12 iberibe
Tụkwasịnụ Ikike: 100000 iberibe otu ọnwa
Ekwe: aromatherapy na akụrụngwa dị jụụ, ọ na-arụ ọrụ nwayọ, dị oke mma maka ojiji na ndụ na ọrụ. Site n'ike nke 300ml, alụlụ nwere ike ịdịru karịa awa 10. Mmehie nke onye na-agbanwe ihe dị ihe dịka 60-70ml / h, ọ dabara na oghere 20-30㎡.
Safety: Ezubere ya na ịrụ ọrụ onwe ya, onye na-akpagbu ga-akwụsị ịrụ ọrụ na akpaghị aka mgbe mmiri gwụ, ma ọ bụ oge agwụla.
Ìhè: Ihe ndị na-esi ísì ụtọ nwere ọkụ ọkụ na-acha 7 agba ọkụ. Ọzọkwa, agba ọ bụla nwere nhọrọ na-egbuke egbuke ma na-egbuke egbuke, nke ahụ pụtara na ọkụ nwere ike ịmegharị ya na agba 14. Ma ọ bụ, ịnwere ike ịtọ ya otu agba.
Nkeji oge: Site na iji bọtịnụ "MIST", ị nwere ike ịtọ ntọala ọkọlọtọ na njigide siri ike, ọzọ, ị nwere ike ịtọlite ​​oge ihe nlereanya 4: 1H, 3H, 6H na-aga n'ihu. Ọrụ a na - enyere gị aka ịme ka ebe niile dị jụụ ma zuo ike.
Ike nbanye 12W
ndenye AC100240V 50 / 60HZ
mmepụta DC24V, 14W, 600mA
ihe onwunwe ABS + PC + PP
ìhè Ìhè 7 agba ọkụ
ngụ oge 1H / 3H / 6H / ON
Nhazi Φ16.8 * 14.8cm
unit ibu 625g
Ogo igbe agba 17 * 17 * 16.5cm
Oke kaadionye 53.3 * 36 * 35cm
NW / katọn 7.50 kgs
GW / katọn 8.50 kgs
SP-G03B 180ml bamboo glass na-ewu ewu acorn udi ísì ụtọ diffuser
SP-USB15 120ml MINI ọcha USB diffuser